पतिलाई छाडेर एकल जिवन बिताइरहेकी चर्चित अभिनेत्री गौरी मल्लको छ काठमाडौँमा आलिसान महल – Gazabkonews
पतिलाई छाडेर एकल जिवन बिताइरहेकी चर्चित अभिनेत्री गौरी मल्लको छ काठमाडौँमा आलिसान महल, यत्रो महलमा गौरीले पतिलाई छाडेपछि एक्लै बस्छिन्, आखिर किन दोस्रो विबाह गरिनन् गौरीले ? गौरीकै उमेरकी मिथियाल शर्माले उनकै अगाडी विबाह गरिन् तर गौरीले किन चाहिनन् ? वैबाहिक जीवन असफल भएपनि गौरीले यि काम गरेर मनग्य धन सम्पत्त, घर गाडी जोडेकी छिन् । गौरी करोडौँ सम्पत्ती मालिक हुन् । हेर्नुहोस् गौरी मल्ल बारे जानकारी दिने यो विशेष भिडियो
चर्चित नायक आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा छन् गहिरो प्रेममा, यि दुईले एकान्तमा समय बिताएको भिडियो रा ता रा त बाहिरियो, गो .प्य भिडियो बाहिरिएपछि त ना वमा आकाश र पूजा, एउटै सिर क भित्र आखिर के गर्दै थिए आकाश र पूजा ? हेर्नुहोस् यो भाइरल भिडियो
देवीको सांगीतिक ‘मुटुको टुक्रा’ : गायिका देवी घर्तीमगरको स्वर रहेको गीत ‘मुटुको टुक्रा’को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतमा ज्योति गुरुङको शब्द तथा सुरज लामिछानेको संगीत र एरेन्ज छ । गीतमा एक प्रवासी आमाले स्वदेशमा भएका आफ्नै दुई सन्तानको सम्झना गरेको कथा प्रस्तुत गरिएको छ । भिडियोमा ज्योतिकै अभिनय छ ।भिडियोमा अनिश्का थापा, शंकर पाण्डे, सलोनी रन्जितकार र इभा सिंह ठकुरीसँगै बाल कलाकार काव्या श्रेष्ठको पनि अभिनय छ ।
भिडियोमा कुशल श्रेष्ठको निर्देशन, छायांकन, सम्पादन र परिकल्पना छ । भिडियोमा नवीन निरौलाको कलर, दीपिका श्रेष्ठको मेकअप छ ।भिडियो गीतकार ज्योतिकै युट्युब च्यानल जेजी क्रियशनबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।